फागुनमा मात्र बैङ्कहरूले साढे ६ अर्ब नाफा थपे : कसले कति ? – Aarthik Samachar
फागुनमा मात्र बैङ्कहरूले साढे ६ अर्ब नाफा थपे : कसले कति ?
By आर्थिक समाचार	 On Apr 4, 2021
आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को फागुनमा वाणिज्य बैङ्कहरूले साढे ६ अर्ब नाफा थपे । कोरोना सङ्क्रमणबीच पनि बैङ्कहरूको नाफाको ग्राफ घट्नु परेको छैन । फागुन मसान्तसम्म करिब ४२ अर्ब नाफा आर्जन गर्दै वाणिज्य बैङ्कहरू सुरक्षित अवस्थामा छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका २७ वटा वाणिज्य बैङ्कको नाफा फागुन महिनासम्म ४१ अर्ब ९५ करोड ९० लाख २० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । माघ महिनासम्म बैङ्कहरूको यस्तो नाफा ३५ अर्ब ९५ करोड ५६ लाख ८० हजार रुपैयाँ रहेको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षको फागुनमा सबैभन्दा धेरै नाफा कमाउनेको सूचीमा नबिल बैङ्क सबैभन्दा माथि छ । अघिल्लो महिना तेस्रो स्थानमा रहेको सो बैङ्कले फागुनमा तीन अर्ब १२ करोड ८८ लाख २० हजार खुद नाफा कमाएर पहिलो बनेको हो । अघिल्लो महिना नबिलभन्दा माथि रहेको ग्लोबल आईएमई बैङ्क दोस्रो स्थानमा आएको छ । सो बैङ्कले फागुनमा तीन अर्ब आठ करोड ९५ लाख २० हजार रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको तथ्याङ्क छ । दुई अर्ब ७८ करोड २१ लाख ३० हजार रुपैयाँ नाफासहित एनआईसी एसिया तेस्रो स्थानमा छ ।
फागुनमा दुई अर्बमाथि नाफा गर्ने बैङ्कको सूचीमा एनआईसी एसियासहित प्राइम कमर्सियल, एनएमबी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्क रहेका छन् ।
प्राइमले दुई अर्ब ४० करोड ४४ लाख रुपैयाँ, एनएमबीले दुई अर्ब १९ करोड ८२ लाख ५० हजार तथा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कले दुई अर्ब ४३ करोड ६ लाख ४० हजार रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेका छन् ।
एक अर्बभन्दा तल नाफा रहेका बैङ्कहरूमा नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैङ्क, हिमालयन बैङ्क, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैङ्क, नेपाल एसबीआई बैङ्क, बैङ्क अफ काठमाण्डू, सेन्चुरी कमर्सियल बैङ्क, सिभिल बैङ्क र नेपाल बङ्गलादेश बैङ्क रहेका छन् । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।